Metro အစ္စတန်ဘူလ် RayHaber | raillynews
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro သတင်း
Özgür Soy သည်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး Metro Istanbul ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များတွင်သတ်မှတ်ထားသောတာ ၀ န်အသစ်အရ Istanbul Metropolitan Municipality နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တွင်“ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် General Manager အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည် [ပို ... ]
ဒီဇင်ဘာလ 2019 Metro Istanbul ၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်အစ္စတန်ဘူလ်ရှိမြေအောက်ရထားများသည်ခရီးသည်ပေါင်း ၁၅၃,၄၉၅ စီးအားယာဉ် ၈၄၄ စီးနှင့်ခရီးသည် ၆၅ သန်း ၂၀၀,၀၀၀ ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး [ပို ... ]
မက်ထရို ၀ န်ထမ်းများကခွေးအားကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ခွေးပိုင်ရှင် Fatma Kamuran Koçသည်သူမ၏ခွေးနှင့်ဘူတာရုံ ၀ န်ထမ်းများဆီသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ Kadikkoy - Tavsantepe Metro လိုင်း Kadikoy ဘူတာ [ပို ... ]
Metro Istanbul Esenler ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည် ၀ န်ထမ်းများအားအလုပ်များသောစီးပွားရေးအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်၊ Metro Istanbul ရဲ့ Esenler District, Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ရဲ့လက်အောက်ခံ [ပို ... ]
ခရီးသည်သန်းပေါင်း ၇၀၀ နီးပါးကို Istanbul Metro သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အမြန်။ အဆင်ပြေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပိုနှစ်သက်သောမက်ထရိုသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားများအားအပြည့်အဝအမြန်နှုန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွင်းသန်း ၇၀၀ နီးပါးခရီးသည် [ပို ... ]
ဝယ်ယူရန် Metro Istanbul ရထားမောင်းနှင်မှု; မက်ထရိုမက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံ Metro Istanbul AŞသည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများကိုအားဖြည့်ရန်အတွက်ရထားမောင်းသူအသစ်များကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာများကို Kariyer.ibb.istanbul တွင်စတင်သည်။ အားလုံးဖွင့်လှစ် [ပို ... ]
Metro Istanbul သည်မက်ထရိုနှင့်ရထားလမ်းများကိုစွမ်းအင်ပေးမည့်ပြည်တွင်း traction transformer ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သန်းနှင့်ချီသောယူရိုများသည်နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်အတွင်းဆက်လက်တည်ရှိနေလိမ့်မည်။ Metro Istanbul, Istanbul Metropolitan မြှို့နယ်၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခု, [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဥရောပအားကစားအပတ် 23-30 စက်တင်ဘာလ၏အခြေအနေတွင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများ၏ရွေ့လျားတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, အစ္စတန်ဘူလ်ကျန်းမာတက်ကြွဘဝမောင်းနှင်မှု [ပို ... ]
မြို့တော်က Metro အစ္စတန်ဘူလ် 500 စာရင်း!
အစဉ်အလာဟာမြို့တော်-ဂျာနယ် 500 500 တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအားဖြင့်ပြန်ဆို Capital သုတေသန၏ရလဒ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါက Metro အစ္စတန်ဘူလ် 500 390 ကုမ္ပဏီကြီးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဆုံးမှာသုတေသန။ သူကသာမန်စာရင်းထည့်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ 2016-2017 [ပို ... ]
တဦးတည်းကုမ္ပဏီထံမှ Metro အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီအကြီးမားဆုံး 500!
Metro အစ္စတန်ဘူလ်, အသားတင်ရောင်းချမှုဝင်ငွေနှင့်အတူ 500 500, 983 281 သန်းပေါင်အဆုံးအဖြတ်အတွက် Fortune မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ။ ဒါဟာနေရာအရပ်ခေါ်သွားတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကုမ္ပဏီ "ခရီးသွားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ" ဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
Kasım Kutlu အစ္စတန်ဘူလ်က Metro စီအီးအိုရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီး
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းခွဲများတပါးအစ္စတန်ဘူလ်က Metro Inc ကိုမှ General Manager Kasım Kutlu နုတ်ထွက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "မစ္စတာ: Kasım Kutlu, သူ့ post ကိုစွန့်ခွာသူကဆိုသည်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်, လူမှုမီဒီယာအကောင့်ကပြောပါတယ် [ပို ... ]